About us - Daxin Imishini Co., Ltd.
Qingdao Daxin Imishini Co., Ltd.
Qingdao Daxin Imishini Co., Ltd.ibhizinisi elisebenzayo elikhiqiza imishini yokusebenza yasemoyeni. Le nkampani ibandakanyeka kakhulu ekwakhiweni, ekuthuthukisweni, ekukhiqizweni nasekuthengisweni kwemishini yomsebenzi wasemoyeni. IDaxin Imishini ithatha umthwalo wokuhlinzeka ngemishini yokusebenza esezingeni eliphakeme, eshibhile ephezulu yokusebenza kwabaningi, ihlale ithuthukisa imikhiqizo ekhona, futhi yethula njalo uchungechunge olusha lwemikhiqizo ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zamakhasimende ahlukile. Imikhiqizo yayo inezici zemishini yenoveli, ukuphakamisa okuzinzile nokusebenza okuphephile. Imikhiqizo isetshenziswa kakhulu ekuhlolweni okuphezulu, ukufakwa kanye nokugcinwa kwamabhizinisi ezimboni nezimayini, ojantshi, imigwaqo emikhulu, izikhumulo zezindiza, imikhumbi, amandla kagesi nezinye izimboni; ukuphathwa kwempahla, ukuthuthwa, nokufakwa kwezinqolobane ezinqolobaneni, emachwebeni nasemigqeni yokukhiqiza; izinkundla zemidlalo, amakamelo okuhlangana kanye nezinye izakhiwo eziphakeme Izigcawu ezingaziwa, ukuhlobisa, ukugcinwa kanye nomsebenzi wokuhlanza, njll., kungathuthukisa kakhulu ukusebenza kahle komsebenzi.
Le nkampani inokusika okukhulu, ukugoba, ukuwelda, ukufafaza neminye imishini yobuchwepheshe, kanye neqembu labanjiniyela bezobuchwepheshe nabasebenzi abasebenza ngemuva kokuthengisa. Le nkampani inenhlangano ezwakalayo, amandla aqinile wezobuchwepheshe kanye nokusebenza kwabasebenzi, inhlangano ephumelelayo yokukhiqiza, kanye nokwesekwa okunokwethenjelwa kokusebenza. Ihlanganisa izinsizakalo zokukhiqiza, zokuthengisa nezokuqashisa ukuhlinzeka ngamakhasimende ahlukene ngemishini nezinsizakalo ezifanele kakhulu.
Qingdao Daxin Imishini ithobela ifilosofi yebhizinisi "yokusebenza okugxilwe ngabantu, ukusebenza okulinganiselwe, ukuphayona nokuqamba, nokwenza kahle", iphishekela umoya webhizinisi we "emisha, ukufuna iqiniso, ukwethembeka nokwenza kahle", isebenzisa ngenkuthalo ukusebenza kweqembu kanye necebo lamabhizinisi aphesheya, futhi isebenzela imishini yasemoyeni Ukuthuthuka kwezobuchwepheshe kwenkampani kuthole imiphumela emihle. Ukuthembela ezinzuzweni zobuchwepheshe, izinzuzo ezintsha nezinzuzo zebhrend, ubuchwepheshe benkampani jikelele kanye namakhono aphelele athuthuke ngokushesha, ngenhloso yokuba ngumkhiqizi wasemkhakheni wokuqala nowaziwa emhlabeni jikelele wemishini yomsebenzi wasemoyeni.
Umkhiqizo Omkhulu: isikisi lift, car lift, cargo lift, i-aluminium ipulatifomu yomsebenzi, isihlalo sabakhubazekile, i-boom lift, indawo ephakeme yeloli yomsebenzi, i-orderpicker, i-stacker, i-dock ramp njll.